कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन के गर्ने, के नगर्ने ? - नेपालबहस
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन के गर्ने, के नगर्ने ?
| १८:४२:०७ मा प्रकाशित
६ जेठ, काठमाडाैं । संसारका अधिकांश मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको स‌ंख्या दिनदिनै बढ्न थालेको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि हामीले हाम्रो बानीमा निकै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि देखिने लक्षणबारे जानकारी लिनु पर्छ । यसको लक्षण ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हुनेसहितका हुन् । तर यसको सुरुवात रुघाबाट हुँदैन अधिकांशमा ।
सार्वजनिक स्थल जानु पूर्व सावधानी अपनाउने गर्नु पर्छ । विशेष गरी ६० वर्ष भन्दा माथिका वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक स्थलको यात्रा सकेसम्म कम गर्नु पर्छ । खोक्दा वा हाछ्यूँ गर्दा मुख छोप्नु पर्छ । खोक्दा वा हाछ्यूँ गर्दा प्रयोग गरेको टिस्यू पेपर डिस्पोज गर्नु पर्छ ।
आफूमा भाइरस भएको वा भाइरसको संक्रमण भएको क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ भने मास्क प्रयोग गर्नु पर्छ । मास्क पनि सही तरिकाले लाउनु पर्छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिन्छ :
आफ्नो व्यक्तिगत स्वच्छतामा ध्यान दिनुस् ।
साबुनले लगातार हात धुनुस् ।
हाच्छ्युँ गर्दा र खोक्दा मुख अवश्य छोप्नुस् ।
हात फोहर देखिएमा साबुन र पानीले अवश्य धुनुस् ।
हात फोहर नभएपनि हातलाई ह्यान्डवाशले अवश्य धुनुस् ।
प्रयोग गरेपछि टिस्युलाई तुरुन्तै बन्द भाँडोमा फ्याँक्नुस् ।
अस्वस्थ भएमा विशेषगरी रुघाखोकी र ज्वरो आएमा चिकित्सकलाई तत्कालै भेट्नुस् ।
मानिसहरूसँग दूरी बनाउनुस् ।
आँखा, नाक र मुख नछुनुस् ।
खोकी वा ज्वरो छ भने कसैसँग पनि सम्पर्क नगर्नुस् ।
सार्वजनिक स्थानमा नथुक्नुस् ।
काँचो र आधा पाकेको मासु नखानुस् । जीवित पशुको नजिक नजानुस् ।
खेततिर नजानुस्, पशु बिक्री हुने ठाउँ र वधशालातिर नजानुस् ।
(यो सामग्री वेबएमडीको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)
नेपालमा एकैदिन थपिए २५५९ कोरोना संक्रमित ६ घण्टा पहिले
साउदीमा तीन महिनामा कोमामा पुगेर बाँचेका भुजेलको उद्धार ६० मिनेट पहिले
नवलपुरको बुलिङटारमा जीप दुर्घटना: एकको मृत्यु, १६ घाइते १ घण्टा पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ १२ घण्टा पहिले
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको बीचमा पर्ने रिम्ना र चाइना बगर १२ घण्टा पहिले
शुक्रबार मौसम बदली रहने १६ घण्टा पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? १३ घण्टा पहिले
एमाले स्थायी कमिटीमा माधव समूह ‘आउट’ १० घण्टा पहिले
डोटीमा मृतावस्थामा भेटिएकी महिलाको पहिचान खुल्यो १२ घण्टा पहिले
आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने विरामीहरुको संख्या बढ्दो १४ घण्टा पहिले
सुर्खेतमा पच्चीस जनाभन्दा बढी भेला नहुन प्रशासनको आग्रह ३ दिन पहिले
ज्याला कम हुदाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्न मान्दैनन् युवा ३ दिन पहिले
गायक रुपक खडकाको फेसबुक सार्वजनिक ३ दिन पहिले
महोत्तरीमा कोरोनासँग लड्ने कुनै छैन तयारी ३ दिन पहिले
फन्डको अध्यक्षमा महतो र सीईओमा भट्टराई नियुक्त ५ दिन पहिले
म्याग्दीबाट मुस्ताङ जाने नयाँ पदमार्ग पहिचान १ हप्ता पहिले
मानहानी मुद्धाको पेशी चढ्यो, सुनुवाई हुन पाएन ३ हप्ता पहिले
रु रु जलविद्युतको आईपीओ कतिले भरे ? २ हप्ता पहिले
राजर्षि जनक प्रतिभा पुरस्कार राणालाई ४ हप्ता पहिले
अदालतको अतिआवश्यक सेवा चैत २८ सम्म सञ्चालन हुने १ वर्ष पहिले
विरगञ्जमा कोरोना संक्रमित बृद्धको मृत्यु ९ महिना पहिले